Ukucwaninga: Lokhu kungaba yimbangela ye-'Fibrotine '- Vondt.net
Ucwaningo: Lokhu kungaba imbangela 'ye-Fibro fog'
22 / 07 / 2018 /Amazwana we-0/i Ubuhlungu obungapheli, izinga Izihloko/av olimalayo
Lapha ungafunda kabanzi ngalokho abacwaningi bakholelwa ukuthi kuyimbangela ye- "Fibro fog" phakathi kwalabo abane-fibromyalgia kanye nokuxilongwa okungapheli kobuhlungu.
fibromyalgia ukuxilongwa kobuhlungu okungapheli obangela ubuhlungu obukhulu emisipheni nasemathanjeni - kanye nokulala okungampofu nokusebenza kwengqondo (njengememori). Ngeshwa, alikho ikhambi, kepha manje ucwaningo lwakamuva seluthole enye ingcezu yephazili kuphazili yezinhlungu eziyinkimbinkimbi. Mhlawumbe lolu lwazi olusha lungasiza ukuthuthukisa uhlobo lokwelashwa? Sikhetha bobabili ukuba nethemba futhi sikukholwe.
Ucwaningo lwakamuva olusanda kwenziwa luthole ukunakwa okuningi ngenxa yokuthola kwabo ucwaningo oluthokozisayo. Njengoba kwaziwa yilabo abathinteka yi-fibromyalgia nokuxilongwa okungapheli kwezinhlungu, kungahle kube nezinsuku lapho kuzwakala sengathi ikhanda 'alilengi' - lokhu kuvame ukubizwa ngokuthi "inkungu enesibindi" (noma inkungu yengqondo) futhi kuchaza ukunakekelwa okungafanele umsebenzi. Kodwa-ke, kuze kube lolu cwaningo, kube nolwazi oluncane lokuthi kungani labo abanezinkinga ezibuhlungu ezingapheli bathinteka yilesi sibonakaliso esibuhlungu. Manje abacwaningi bakholelwa ukuthi kungenzeka ukuthi bathole ingxenye yephazili: okuyindlela "yomsindo wezinzwa".
Kulolu cwaningo, kushicilelwe kwiphephabhuku locwaningo Imvelo - Imibiko Yesayensi, abacwaningi bakholelwa ukuthi ukungasebenzi kahle kwengqondo kanye nokukwazi ukugxilisa ingqondo kungenxa yamazinga aphakeme kakhulu alokho abakubiza ngokuthi "umsindo wezinzwa" - okusho ukuthi imisinga kagesi ekhuphukile nengahleliwe ecekela phansi imithambo yezinzwa yokuxhumana nokukhulumisana.
Ucwaningo lwalunabahlanganyeli abangama-40 - lapho iziguli eziyi-18 zitholwe zine-'fibromyalgia 'kanti iziguli ezingama-22 zaziseqenjini lokulawula. Abaphenyi basebenzise i-Electroencephalogram (EEG), okuyisilinganiso se-neurophysiological, ukuqopha umsebenzi kagesi wobuchopho. Bese balinganisa imisinga kagesi yezinzwa baqhathanisa amaqembu amabili ocwaningo. Imiphumela abayitholile iyamangaza - futhi izosebenza njengesinye isifundo socwaningo esisekela ukuthi kunezici zomzimba ngemuva kwe-fibromyalgia nokunye ukuxilongwa kobuhlungu obungapheli.
Imiphumela ikhombise amazinga aphakeme kakhulu "omsindo wezinzwa" phakathi kwalabo abane-fibromyalgia - okungukuthi imisebenzi eminingi kagesi, ukuxhumana kwezinzwa okungekuhle kanye nokuxhumana phakathi kwezingxenye ezahlukahlukene zobuchopho. Okutholakele kunikeza isisekelo sokukwazi ukusho okuningi mayelana nembangela yalokho okuchazwa ngokuthi "inkungu enesibindi".
Ucwaningo lunganikeza isisekelo sezindlela ezintsha zokwelashwa nezindlela zokuhlola. Ngale ndlela, abaningi bangonga imithwalo ebalulekile njengoba bedlula kulokho okubonakala sengathi ngophenyo olude olungenamiphumela. Bekungeke yini kube kuhle uma ekugcineni ungazitholela izinto ezithile zokuxilonga kulabo abanobuhlungu bezinhlungu ezingalapheki?
Ingabe i-Yoga Ungayivusa Iphutha?
Kwenziwe ucwaningo oluningi olubheke umphumela i-yoga enayo ku-fibromyalgia. Phakathi kwezinye izinto:
Ucwaningo oluqhamuka ku-2010 (1), olunabesifazane abangama-53 abaphethwe yi-fibromyalgia, lukhombise ukuthi izifundo ze-yoga zamasonto ayisishiyagalombili zithuthuke ngendlela yobuhlungu obuncane, ukukhathala nemizwa ethuthukisiwe. Uhlelo lwezifundo lwalunokuzindla, izindlela zokuphefumula, ukuma okuhle kwe-yoga kanye nemiyalo yokufunda ukuthi ungabhekana kanjani nezimpawu ezihambisana nalesi sifo.
Olunye ucwaningo lwe-meta (ukuqoqwa kwezifundo eziningana) kusuka ku-2013 luphethe ngokuthi i-yoga ibe nomthelela wokuthi ithuthukise ikhwalithi yokulala, yehlisa ukukhathala nokukhathala, nokuthi kwaholela ekucindezelekeni okuncane - ngenkathi labo ababambe iqhaza ocwaningweni babika izinga lempilo elithuthukisiwe. Kepha ucwaningo luthi futhi alukho nhlobo ucwaningo olwanele okwamanje lokuqinisekisa ukuthi i-yoga yayisebenza ngokumelene nezimpawu ze-fibromyalgia. Ucwaningo olukhona lubukeka luthembisa.
Isiphetho sethu ngemuva kokufunda izifundo eziningana ukuthi i-yoga nakanjani ingabamba iqhaza kwabaningi ngendlela ephelele yokuqeda i-fibromyalgia nokuxilongwa okungapheli kobuhlungu. Kepha sikholelwa futhi ukuthi i-yoga kufanele iguqulelwe kumuntu ngamunye - hhayi wonke umuntu uzuza kwi-yoga ngokunwebeka nokugoba kakhulu, ngoba lokhu kungadala ukuqhuma esimeni sabo. Isihluthulelo ukuzazi.
Sethemba ngempela ukuthi lolu cwaningo lungakha isisekelo sokwelashwa kwesikhathi esizayo kwe-fibromyalgia nokuxilongwa okungapheli kobuhlungu.
UGonzalez et al, 2017. Ukwanda komsindo we-neural kanye nokuvumelanisa kwengqondo okungasebenzi kahle ezigulini ze-fibromyalgia ngesikhathi sokuphazamiseka kwengqondo. Imibiko yeSayensi ivolumu 7Inombolo ye-athikili: 5841 (2017
IPHEPHA LOKUQALA: - Ungazi Kanjani Uma Unengubo Yegazi
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibrotåke-2.jpg?media=1648573622 449 700 olimalayo https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 olimalayo2018-07-22 13:40:542020-06-14 21:19:39Ucwaningo: Lokhu kungaba imbangela 'ye-Fibro fog'
Ubuhlungu ethangeni elingaphezulu: Imbangela, ukwelashwa nokuvimbela I-Fibromyalgia: Ikuphi Ukudla Okufanele Futhi Ukudla Kwalabo Abene-Fibromyalgia?